The 8th Habit | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
The 8th Habit	Posted by mm thinker on August 31, 2007
Posted in: Management, Philosophy.	Tagged: Management.	အဋ္ဌမမြောက်အလေ့အထ – ၁
– အလုပ်သမားဦးရေထက်ဝက်ခန့်က သာ သီတင်းပတ်အကုန်တွင် ပြီး မြောက်အောင် လုပ်လိုက်သော သူတို့ ၏ အလုပ်အပေါ် ကျေနပ်မှု ရှိသည်။ – ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် သူတို့၏ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းက အပြည့်အ၀ အထောက်အပံ့ပေးနိုင် သည်ဟု ခံစားမိသည်။
– ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ သူတို့အလုပ် လုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း အပေါ် အပြည့်အ၀ယုံကြည်မှု ရှိသည်။ – ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကသာ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများ သို့မဟုတ် ဌာနများနှင့် ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်ရာ တွင် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု၊ လုံးဝယုံကြည်မှု ရှိသည်။
← Myanmar & New Isms	Dialogue-2 →	Pages	about